Digniin laga soo saaray Cydurka Halista ah Karoone | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Wararka Digniin laga soo saaray Cydurka Halista ah Karoone
Digniin laga soo saaray Cydurka Halista ah Karoone
, waxaan ahay Layla Axmed,oo ku sugan Chine, ardayad dhigata kuliyada caafimaadka ee jaamacada Zanjan.
Caabuqa koroona fayrays ama COVD-19 wuxuu gaadhi doonaa wadan kasta dhakhso, ama waqti aan dheeraynba. Waxaan u shaki ka taaganayn in wadamo badani aanay haysan shaybaadho casriya iyo qalab tayaysan.
Fadlan isticmaal faytimiin c dabiiciya intii karaan kaaga ah ee maangal ah, si uu u xoojiyo habdhiskaaga difaac.
Xilliyadii u danbaysay, caabuqa looma helin, wax talaala ama daawo ah oo u khaasa nasiib-daro. Marka loo fiiriyo is badelkiisa hide, wuxuu ka samaysan yahay mid khatara. Xanuunkani wuxuu u muuqdaa mid ay sababeen hidasidayaal kala gedisan, oo u dhaxeeya maska iyo fiidmeerta wuxuuna ku dhacaa awooda uuna saameeyaa naaslayda, oo ay aadanuhana kamid yihiin.
Waa muhiim inaad u leedahay aqoon weyn xanuunka: buuni (professor) Chen Horin mulkiilaha cusbataalka ciidanka qalabsida( milatary) ee Beijing wuxuu yidhi, “Gabal liin dhanaana oo lagu daray koob biyo diirani waxay badbaadin karaan noloshaada”.
Sidaa darteed hawl kastood ku mashquulsan tahay, akhri dhanbaalkan una dir dadka kale!
Liin dhanaanta kululi waxay dili kartaa kansarka!
U jeex liin dhanaanta saddex gabal koobna ku rid, kuna laaq biyo diiran, una badel (Alkaline water) ama biyo alkaline ah, cabna maalin kasta ugu danbayna waxay dheef u tahay qof kasta.
Daawaddani waxay kaliyoo burburin doontaa unugyada jiran, unugyada caafimaadka qabana waxba ma saamayn doonto.
Marka labaad carboxylic acid iyo sharaabka liin dhanaantu waxay joogtayn karaan dhiig-karka, waxayna ka hortagaan halbawlayaasha oo cidhiidhi noqda, waxayna joogteeyaan dhiig wareega iyo inay hoos u dhigaan xadiga xinjirawga.
Markaad akhrido dhanbaalkan u dir qof kastood jeceshahay, adiguna ka taxadar caafimaad kaaga shaqsiyeed.
Tale, buuni Chen Horin wuxuu kugu wargelinayaa, cidkastoo fariintan heshaa inay ugu yaraan masuul ka tahay inay badbaadiso qof nafsadiisa… Waan qabsaday shaqadayda adna waxaan kuu rajaynayaa inaad igu kaalmayso si aan u wada hormarno, Alle hayna amaanaysto.
Tarjumid Cabdiqaadir Badri